PSJTV | हत्केलामा सुपरस्टार लेखिएकी नारी
स्वदेश फर्किएर प्लेनबाट उत्रिनासाथ उनका आँखाबाट उस्तैगरी आँशु बर्सिए। सायद, योपटक खुशी र सफलताको आँशु थियो त्यो।
'दिल खोगया, होगया किसीका
अब रासता, मिलगया खुशीका ...'
उनी यो गीत यति धेरै गन्गुनाउँथिन् कि, त्यति त एक पुजारीले देवीदेवताको नामपनि पुकार्दैन होला। श्रेया घोषालका लगभग सबै गीतहरु कण्ठ थियो उनलाई। उनले एउटा सानो रेडियो किनेकी थिइन्, जो सिर्फ गीत सुन्नलाई प्रयोग गर्थिन्। उठ्नासाथ गीत, खाली समयमा गीत र सुत्नुअघिसम्म गीत। पठनपाठनको अलावा गायननै उनको एकमात्र साथी थियो। कतिसम्म भने, क्लासमा बस्दासमेत बाहिर कतै गीत बजेको सुनेपछि उनका ओठ र हातहरु आफैं काँप्न थाल्थे। अनि उनका खुट्टाहरुले गीतको बिट पक्रिन थाल्थे। गायनमा उनको यस्तो लगाव देखेर उनलाई पढाउने शिक्षकहरुनै चकित हुन्थे। तर गालीभने गर्न सक्दैनथे, किनभने उनी त्यो विद्यालयकै सबसे मेधावी छात्रा थिइन्।
बलिवुडमा महिला पार्श्वगायनकी पर्याय हुन् श्रेया घोषाल। चारवटा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार र छवटा फिल्मफेयर अवार्ड जितिसकेकी यी गायिका बलिवुडकै सफल गायिकाहरुमध्ये एक हुन्। उनलाई नसुन्ने र मन नपराउने मान्छेहरु सायदै होलान्। उनीजस्तै मन्त्रमुग्ध भएर गाउनसक्ने अर्को पात्र यो संसारमा बिरलै पाइन्छ। आफ्नो अद्वितीय गायनले बलिवुडमा यतिबेला एकछत्र राज गरिरहेकी यिनै श्रेया घोषालका गीतहरु हुबहु गाउनसक्ने एकमात्र गायिकाभने नेपालमा जन्मिसकेकी छिन्। आफुले गीत सुन्न थालेदेखि श्रेया घोषालको डाइहार्ड फ्यान बनेकी यी स्वर किन्नरीको नाम हो, सुनिता थेगिम।
सुनिता थेगिम, जुलाई १६, १९९६ मा ईलामको आमचोकमा आमा छविमाया आङ्देम्बेको कोखबाट जन्मिन्। उनका पिता डकेन्द्रसिं थेगिम गाउँमै एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। ठूलो परिवारकी कान्छी छोरी सुनिता सानैदेखि तीक्ष्ण दिमागकी थिइन्। उनको परिवारले किराँत धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले उनी सानै छँदा उनको परिवार दक्षिणी ईलामस्थित किराँतीहरुको धार्मिकस्थल माङ्सेबुङमा बसाईं सरेर गयो। यहींबाट सुरु भयो, सुनिताको अनौपचारिक गायनयात्रा। सानो उमेरमै किराँत धर्मको केन्द्रीय कलाकारका रुपमा गाउने अवसर पाएकी सुनिता नृत्यमा समेत उत्तिकै पारङ्गत थिइन्। क्लासमा सधैं प्रथम हुने सुनिता अत्यन्तै अनशासित छात्रापनि थिइन्। आफ्नो गायन र नृत्यका कारण सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेकी सुनिता क्लासमा समेत सधैं प्रथम हुने भएपछि त केटाहरुले मन नपराउने कुरै भएन। कसैले उनको नाम कोही केटासंग जोडिदिंदा उनलाई औधी रिस उठ्थ्यो। कतिले त मन पराउने आशयले जिस्काउनेपनि गर्थे। तर उनको त्यो कलिलो मश्तिष्कले त्यस्तो कुरा कहाँ बुझ्नु! उनी सधैंजसो हाँसेरै यस्ता कुरा टारिदिन्थिन्।
किराँत धर्मावलम्बीहरुमाझ गायनमा राम्रो छाप बनाइसकेकी सुनिताले कक्षा नौमा आएर औपचारिक रुपमा एउटा गीतमा ब्रेक पाइन्। 'ईक्साधिङ खाम्बेक' बोलको किराँती साँस्कृतिक गीत उनको पहिलो रेकर्डिङ थियो। यतिन्जेल सुनिता पढ्नलाई भनेर झापाको दमक झरिसकेकी थिइन्। उनकी दिदी रोजाले गायनमा लाग्न उनलाई सधैं प्रोत्साहन दिइरहिन्। उत्कृष्ट अङ्कका साथ एसएलसी उतीर्ण गरेकी सुनिताले विज्ञान संकाय लिएर प्लस टु पढिन् तर पढाइले उनको गायनयात्राभने रोकिएन। यसैक्रममा सुनिताले 'नेपाली तारा सिजन ३'मा दिदी रोजाकै सहयोगमा भाग लिइन्। उनले अडिसनमा गाएको गीतपनि श्रेयाकै 'छाएछ वशन्त' थियो। ठूलो अपेक्षा लिएर रियालिटी शोमा भाग लिएकी सुनिता दोश्रो चरणबाट माथि जानभने सकिनन्। उनलाई यो कुराले यति नराम्ररी छोयोकि, तीनचार दिन त कोठा थुनेर भित्रै रोएर बसिरहिन्। दिदी रोजाले बल्लतल्ल सम्झाएपछि उनी फेरि गायनमा फर्किन तयार भइन्। अब उनलाई आत्मानुभूति भइसकेको थियोकि, उनको गायनमा कहींकतै कमजोरीहरु पक्कै छन्। त्यसपछि उनले औपचारिक रुपमा अनिल फागोलाई आफ्नो सङ्गीत गुरु मानेर साधना गर्न थालिन्।
प्लस टुपनि उत्कृष्ट अङ्कका साथ उतीर्ण गरिसकेपछि सुनिता काठमाडौं आइन्। काठमाडौं आउनासाथ उनले चलचित्र 'प्रेमगीत'को कभरगीत गाउने अवसर पाइन्। यो गीत युट्युबमा अपलोड भइसकेपछि उनको नाममा प्रसंशाको बाढीनै आयो। लगत्तै उनले 'विमेन इन कन्सर्ट'मा भाग लिइन् र त्यसमा दोश्रो स्थान हासिल गर्न सफल भइन्। त्यसपछि सुनिताले यति धेरै गीतहरुका लागि अफर पाइन्, मानौं उनी चल्तीकी गायिका हुन्। योबीच उनले 'अतीत,' मीतज्यू,' 'जूनी जूनी'जस्ता थुप्रै कलेक्सन एल्बमहरु र सोलो गीतहरु रेकर्ड गराइन्। उनका लागि अवसरका ढोकाहरु एकबाट अर्को गर्दै खुलिरहेका थिएभने सफलतापनि उत्तिकै पाइरहेकी थिइन्। तर यतिका गीतहरु गाइसकेरपनि गायनबाट सुनिताले व्यवसायिकताभने हासिल गरेकी थिइनन्।
अन्तत: सानोमा पाइलट बनेको सपना देख्ने गरेकी सुनिताले गायनमा पहिलो व्यवसायिक अफरपनि पाइन्। चलचित्र 'जालो'को 'सुनको होइन, चाँदीको' बोलको गीतले गायन करियरकै पहिलो कमाइ दिलायो सुनितालाई। त्यो गीत गाएबापत उनलाई पाँच हजार दिइएको थियो। गीत गाएर पहिलोपल्ट पैसा पाएकी सुनिताले गायनबाट आफ्नो मिठो व्यवसायिक सुरुवातपनि गरिन्। त्यसपछि उनले गाउने र पैसापनि कमाउने क्रम एकसाथ चलिरह्यो। योबीच अचानक एकदिन आएको एउटा खबरले उनी एकप्रकारले स्तब्धझैं बनिन्। उनलाई कन्सर्टका लागि भनेर दक्षिण कोरियाबाट निम्तो आयो। एकछिन त उनले यो कुरा पत्याउनै सकिनन्। तर खबर साँचो हो भन्ने थाहा पाएपछि उनमा खुशीको सीमा रहेन। सफलताको उच्चतम् बिन्दुमा पुगिसकेकी सुनिता अबभने कोरिया जाने तयारीमा लागिन्। उनलाई पुर्याउन एयरपोर्टसम्म उनका पिता गएका थिए। पहिलोपल्ट देशको माटो छोडेर उड्न लागेकी सुनिताले आफ्नो आँशु थाम्न सकिनन् र एयरपोर्टमै भक्कानिएर रोइन्। उनका पिताले सम्झाएर सफलताको शुभकामना दिंदै उनलाई बिदाइ गरे। सुनिता गहभरी आँशु बनाउँदै पितासंग बिदा भइन्। प्लेनभित्रपनि उनको आँशु निरन्तर बहिरह्यो। सुनिताको त्यो पहिलो विदेशभ्रमणले अपार सफलता हासिल गर्यो। अचम्म त के भयोभने, उनीसंगै कोरिया गएका कलाकारहरुमध्ये उनले सबैभन्दा बढी तारिफ बटुलिन्। तीन दिने कोरियाको त्यो अविश्मरणीय बसाइमा उनी 'द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट' भइन्। साथमा, एउटै कन्सर्टबाट तीन लाखको मोटो रकमसमेत कमाउन सफल भइन्। स्वदेश फर्किएर प्लेनबाट उत्रिनासाथ उनका आँखाबाट उस्तैगरी आँशु बर्सिए। सायद, योपटक खुशी र सफलताको आँशु थियो त्यो। त्यसपछि सिक्किम र स्वदेशभित्रै अनेक ठाउँहरुमा कन्सर्टका लागि उनलाई निम्त्याउनेको ओइरो लाग्यो।
बान्तवा, नेपाली र लिम्बू भाषामा गरेर दुईसय गीत रेकर्ड गराइसकेकी सुनिताका 'आँखैमा आउँछ्यौ तिमी,' 'धेरैपछि भेटेको,' 'धानैमा नाच्नु'जस्ता दर्जनौं गीतहरु युट्युबमा रुचाइएका छन्। तीमध्ये युट्युबमा केही समयअघि रिलिज भएको चलचित्र 'छिरिङ'को 'बोल बोल पाखाहरु' भन्ने गीत हालसम्म दुईलाख तीसहजार पटक हेरिसकिएको छ। उनले केही दिनअघिमात्रै 'हत्केलामा' बोलको गीत युट्युबबाट रिलिज गरेकी छिन्। यो गीत उनले हालसम्म सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको गीत हो। सुनिता आफैंले अभिनयसमेत गरेको यो गीतबाट उनले अपेक्षाकृत रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरुपनि पाइरहेकी छिन्।
सुनिताले हालसम्म थुप्रै गायक तथा सङ्गीतकारहरुसंग काम गरिसकेकी छिन्। तीमध्ये उनलाई एकदमै प्रिय लाग्ने अग्रजहरुमा पारस मुकारुङ, हरि लम्साल, यश कुमार र सञ्जीव बराइली पर्छन्। महिलाहरुमा श्रेया सोताङ उनको फेवरिट गायिका हो। तर रकस्टार अभया सुब्बा उनका लागि सर्वथा सम्मानित गायिका हुन्। उनी अभयाको पर्सनालिटीबाट यति प्रभावित छिन् कि आफुपनि अभयाजस्तै बन्ने सपना सधैं देखिरहन्छिन्। अभया सुब्बाको तूलना अन्य नेपाली कलाकारहरुसंग गर्न नसकिने उनको तर्क छ। अभयाको अनुभव, गायकी, निडरता, नेतृत्वक्षमता र परामर्शबाट सुनिता अत्यन्तै प्रभावित छिन्। भविष्यमा अभया सुब्बासंग एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्ने उनको ठूलो सपना छ।
गायनक्षेत्रमा लागेर सुनिताले छोटो अवधिमै अनेक आरोहअवरोहहरु भोगिसकेकी छिन्। नयाँ कलाकारलाई ठूला प्रोजेक्टहरुमा विश्वास नगरिंदा उनलाई बडो नरमाइलो लाग्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा आएको विकृतिले पनि उनलाई पीडा दिइरहन्छ। सङ्गीतनै नबुझिकन गीत रेकर्ड गराउने ट्रेण्ड देखेर उनलाई वाक्क लागेर आउँछ। 'म्यूजिकल्ली'जस्ता एप्सले ओरिजिनल कलाकारहरुको योगदानबाट अनुचित फाइदा लिइरहेकोप्रति उनी चिन्तित छिन्। आफुलाई धेरैले साँस्कृतिक कलाकारको रुपमा मात्रै हेर्ने गरेकोमा पनि सुनिताको गुनासो छ। उनी आफुले सबै प्रकारका गीतहरु गाउनसक्ने दाबीसमेत गर्छिन्। यसैका लागि आफुलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछिन्। तथापि, सुनिता हालसम्मको आफ्नो कामबाट सन्तुष्टभने छिन्।
यतिबेला सुनिता आफ्नो सोलो एल्बम 'सेप्माङ'को तयारीमा व्यस्त छिन्। आउँदो सोमबार अर्थात श्रावण २१ गते रिलिज हुने यो एल्बमको दुईवटा म्यूजिक भिडियोसमेत बनिसकेको छ। यो एल्बममा उनको आफ्नै लगानी रहेको छ। खासमा उनी यो एल्बमको नाम आफ्नै आमाको नामबाट 'छवि' राख्न चाहन्थिन्। तर सङ्गीतकार पारस मुकारुङले उनको एल्बमको नयाँ नाम जुराइदिएका छन्। 'सेप्माङ'को अर्थ सपना हो। खासमा, आफ्नै एउटा सोलो एल्बम बनाएर सफलता प्राप्त गर्नु उनको सपनापनि हो। 'सेप्माङ'पछि उनी डिआर अटुसंगको कोलाबोरेसन एल्बममा काम गर्दैछिन्। त्यसपछिका प्रोजेक्टहरुको लिस्टभने निकै लामो छ।
'अनि रिलेसनसिप स्टाटसचाहिं के हो नि?'
आफ्ना चम्किला दाँतहरु देखाउँदै उन्मत्त हाँसो हाँसेर सुनिता जवाफ दिन्छिन्, 'अहिलेसम्म त सिङ्गलनै छु भन्नुपर्ला।'
उनलाई प्रेमप्रस्तावका थुप्रै म्यासेजहरु आउने गरेको सुनाइन्। तर सबैलाई 'थ्याङ्क यू' भनेर टारिरहेकोपनि बताइन्। एकपटक त उनका पितासंग उनको हात माग्नपनि केटापक्ष आएका रहेछन्। तर यो कुरा पिताले उनलाई सुनाउने आँटभने गरेनन्। भर्खरै किशोरावस्था पार गरेकी छोरीका लागि यो उचित खबर थिएन। अफेयर र बिहेजस्ता कुरासंग सुनिताको कुनै चासो छैन। अहिलेसम्म कसैसंग त्यस्तो 'डिप क्रस' नपरेको बताउँछिन् उनी। तर उनको सेलिब्रेटी क्रसभने शाहिद कपुर हुन्।
'जीवनमा कस्तो मान्छेको चाहना छ त?'
यो प्रश्नको जवाफमा अलि गम्भीर भएर सुनिता विस्तारै मुख खोल्छिन्, 'नारीको र मेरोपनि कामको सम्मान गर्ने।'
'अनि कम बोल्ने।'
दोश्रो वाक्य भनिसक्दा सुनिता फेरि आफ्ना मोतिदाना छरेर उस्तै अट्टहास छोड्छिन्।
यतिन्जेल उनले पिइरहेको सादा लस्सीको गिलासपनि रित्तिएछ। हाम्रो गफ सकिंदा अनामनगरको एउटा क्याफेमा साँझको सात बजिसकेको छ। उनी आफ्नो स्कुटीको हेल्मेट पहिरिन्छिन् र जानलाई मसंग बिदा माग्छिन्।
साँझको थोरै उज्यालोमा अलि पर म देख्छु, गीत गाएरै कमाएको पैसाले किनेको आफ्नै डियो स्कुटीमा 'हत्केलामा सुपरस्टार लेखिएकी नारी' सररर गइरहेकी छिन्। म मन्द मुस्कानसंग उनी ओझेल परुन्जेल हेरिबस्छु।
अँ साच्ची त, उनी मसंग बिदा मागेर घरतिर गएकीचाहिं होइनन् नि। गीतको बाँकी एडिटिङ सक्नलाई स्टुडियोनै फर्किएकी हुन्!
युट्युब 'प्रेमगीत' शाहिद कपुर श्रेया घोषाल सुनिता थेगिम